रवि ओड बने दोस्रो नेपाल आइडल, को को भए फस्ट र सेकेन्ड रनरअप ? — Sanchar Kendra
रवि ओड बने दोस्रो नेपाल आइडल, को को भए फस्ट र सेकेन्ड रनरअप ?
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन २ को बिजेता कञ्चनपुरका रबि ओड बनेका छन् । शुक्रबार नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकको ग्राउन्डमा भएको ‘ग्रान्ड फिनाले’ मा बिक्रम बराल, सुमित पाठक र अस्मिता अधिकारीलाई पछि पार्दै रविले नेपाल आइडलको उपाधि जित्न सफल भएका हुन् ।
त्यसैगरी दोस्रो संस्करणको नेपाल आइडलमा अस्मिता अधिकारी थर्ड रनर अफ भएकी छन् । उनले होन्डाको तर्फबाट स्कुटर पनि प्राप्त गरेकी छन् । यो पटकको आइडल ‘फिनाले’ ललितपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकमा भएको थियो ।
‘मन जित्छ उसले, सुमधर गाउँछ जसले’ भन्ने ट्यागलाइनका साथ सुरु भएको नेपाल आइडलको दोस्रो संस्करण विजेता रविले २० लाख रुपैयाँ, एउटा होन्डा डब्लूआर–भी कार, एउटा एल्बमको सम्झौता र विश्वभ्रमण अथवा ५० लाख रुपैयाँ नगद पाएका छन् ।
साथै, उनले एउटा एल्बमको सम्झौता र विश्व भ्रमणमध्ये एक छनोट गर्न पाउने छन्। एमएमएस र मोवाइल एप भोटिङका आधारमा नेपाल आइडलको विजेता छनौट गरिएको हो ।
बाध्यता गरिवीको जिन्दगीले पिल्सिएका रविका बुढा बुवा अहिले पनि भारतमा ‘वाचम्यानको’ काम गरिरहेका छन । सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनी आफ्ना बाजेको प्रेरणाबाट गीत संगितमा लागेका थिए । सानै छदा गुनगुनाएको सुनेर आमाले सोच्थीन रे मेरो छोरो एकदिन ठुलो कलाकार बन्छ होला। विडम्बना यतिबेला छोराको सफलता हेर्न चाहने उनकी आमा यो संसारमा छैनन् ।
नेपाल आईडलमा आउनु अघि उनी विभिन्न स्थानीय स्तरका प्रतियोगितामा सहभागि हुदै धनगढीको एक दोहोरी साँझमा गाउने गर्दथे ।आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारमा हुर्केर गायन प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल आइडलको उत्कृष्ट चारमा पुगेपछि सुदूरपश्चिमका रवि ओडको चर्चा सर्बत्र चुलिएको थियो ।